खीर खान घरमा बोलाएर सात वर्षीया बालिकालाई …. – ABC NEWS 24
खीर खान घरमा बोलाएर सात वर्षीया बालिकालाई ….
सप्तरी, १३ मङ्सिर: सात वर्षीया बालि’कालाई बला’त्कार प्र’यासको आरो’पमा ७६ वर्षीय वृद्ध प’क्राउ परेका छन् ।
प’क्राउ प’र्नेमा सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका–५ लोहजराका लक्ष्मी महतो रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बालिकालाई खीर खान घरमा बोलाएर ब’ला’त्का’र गर्ने प्र’यास गरेको पी’डित परिवारको उजुरीका आधारमा आरो’पित’लाई प’क्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुपका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेशकुमार सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार पी’डितको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा शुक्रबार स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ ।
पी’डितका बुवाले इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुपमा उजु’री दिएको प्रहरीले जनाएको छ । तिरहुत गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष रमानन्द चौधरीले आरो’पितले बालिकालाई घरमा बोलाएर यौ’न दु’व्र्यव’हार गरेको बताए । क’पडा खो’लेपछि बालिकाले चि’च्याएको सुनी स्थानीयवासी पुगेर बालिकाको उ’द्धार गरेको उनले जानकारी दिए ।
वडाध्यक्ष चौधरीका अनुसार अरो’पित महतोले पाँच वर्षअघि पनि गाउँकी एक बालिकालाई यौ’न दु’व्र्यव’हार गरेका थिए । गाउँमा बसेको पञ्चायतले उतिबेला रु ६०० जरि’वाना ति’राएर छाडिएका स्मरण गर्दै वडाध्यक्ष चौधरीले भने, “त्यसबेला गाउँले मिलेर छाडे, अहिले पुनः उनैबाट यस्तो घट’ना भयो ।
← विमा’नस्थलमा आक्र’मण, ६ जनाको ह’त्या
बुहारीको बयान : जब सासु बाहिर जानुहुन्थ्यो, ससुराले मौ’का छोपिहाल्नुहुन्थ्यो’ हेर्नुहोस् !! →